Waaxda DCI-da oo bilowday baaritaano lagu baadi goobayo aqoonyahan Sh Cabdiwahaab | Star FM
Home Wararka Kenya Waaxda DCI-da oo bilowday baaritaano lagu baadi goobayo aqoonyahan Sh Cabdiwahaab
Waaxda DCI-da oo bilowday baaritaano lagu baadi goobayo aqoonyahan Sh Cabdiwahaab
Agaasimaha waaxda dambi baarista dalka ee DCI-da George Kinoti ayaa sheegay in la bilaabay baaritaano ku aaddan halka uu ku sugan yahay Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamed oo ah aqoonyahan soomaaliyeed sidoo kale falanqeeya arrimaha geeska Afrika oo maalmo ka hor laga afduubtay bartamaha caasimadda dalka ee Nairobi.
Mr. Kinoti oo maanta xarunta dhexe ee waaxdan ku qaabilay madax ka socotay golaha sare ee muslimiinta dalka ee SUPKEM, ayaa waxay u gudbiyeen walaacooda ku aadaan kiisaska afduubka ee sii kor dhaya.
Waxaa uu agaasimaha waaxda DCI-da ballan qaaday in laguda galay baaritaanno lagu xaqiijinayo halka uu ku sugan yahay Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamad oo maalmo ka hor la waayay.
Waxaa uu sheegay in baaritannadooda ay ka bilabeen goobtii laga afduubtay Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamad oo ku taalla wadada Turbman ee bartamaha Nairobi, islamarkaana ay gaari u qafaasheen afar qof oo dhar cad ah.
Golaha sare ee muslimiinta dalka ee SUPKEM iyo kooxaha udooda xuquuqda aadanaha ayaa waxay ka codsadeen agaasimaha waaxda DCI-da George Kinoti inuu diiradda saaro falalka afduubka islamarkaana ay gacanta kusoo dhigaan kuwa arrinkan ka dambeeya.
Qoyska Cabdiwahaab ayaa sheegay in ay aad ugu walaacsan yihiin maqnaanshaha aqoonyahanka.
Mr. Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamed ayaa ah aqoonyahan cilmi durugsan u leh arrimaha gobolka Geeska Afrika.
Waxaa uu sidoo kale qayb ka ahaa qaar ka mid ah machadyada cilmibaarista ee ka dhisan Geeska Afrika, isaga oo sida oo kalena ahaa bare jaamacadeed waxna ku qori jiray mid ka mid ah warbaahinada dalka
Waxaa uu sidoo kale ahaa falanqeeya ka faallooda arrimaha Soomaaliya, isagoo la sheegay in taagerro weyn u yahay madaxweynaha Soomaaliya Maxamad Cabdullaahi Farmaajo.
Previous articleMaxaa laga filan karaa kulanka u dhaxeeya Farmaajo iyo Rooble oo ka furmay Madaxtooyada Soomaaliya?
Next articleSaldhigyo boolis oo dheeraad ah oo laga hirgelinayo ismaamulka Laikipia